IRoseselmash izokwethula izinhlelo ezingavunyelwe zabavuni - i-Potato System Magazine
Embukisweni we-AGROSALON-2020, isitshalo iRomeselmash sizokhombisa inqwaba yezinhlelo ze-elekthronikhi lapho okuvunelwa khona inkampani engavuni.
Ngesikhathi somkhankaso wokuvuna walo nyaka, izivivinyo zaqala ku-TORUM zihlanganisa nezinhlelo ze-autopilot ezisekelwe kubuchwepheshe bokuklama okwenziwe ngobuciko. Lezi zixazululo zingathuthukisa kakhulu ukunemba kwemishini yezolimo, ikhwalithi yokubhula okusanhlamvu kanye namanye amazinga athile. Ngenxa yalokhu, "izinhlelo ezinhle" zokuhlanganisa ukulawula ukuvuna zikhulisa umkhiqizo wazo ngo-15-20%.
IRoseselmash isiqalile ukukhiqiza abavuni abangahleliwe njengengxenye yephrojekthi yayo entsha "ye-Autonomous Farm", okuhloswe ngayo ukukhuphula izinga le-automation yezolimo.
Ngokusho komkhiqizi, i-TORUM ihlanganisa abavuni abangaphansi kokulawulwa kobukrelekrele okwazi ukunamathela ku-trajectory ebekiwe yokuhamba ngokunemba okungamasentimitha ayi-10. I-autopilot ithola izithiyo ngokwayo, ngemuva kwalokho imise umshini bese yazisa opharetha ngesimo. Uhlelo lwe-RSM Explorer Plus, olususelwa ezinhlelweni zombono womshini, lubhekele ukuxazulula le nkinga. Ukusebenza kwayo kufaka phakathi ukulawula okuguqukayo, ukuphakamiswa okuzenzakalelayo kwenhloko ngaphambi kokuqaliswa kwayo kanye nokubuyela kwayo emsebenzini.
Isoftware ye-RSM Router kanye ne Hardware tata kusiza ekwakheni umzila ophumelela kakhulu wokuhamba kwenhlanganisela enkambu yonke Kunzima kakhulu ukuxazulula le nkinga ngisho nomuntu ohlanganisayo onolwazi kunokwakha ubuhlakani bokufakelwa. Ngenxa ye-automation, inani lokulahlekelwa okusanhlamvu liyancipha, ukuvuna kwenziwa ngqo ngesikhathi, futhi ukusebenza kwezinhlanganisela kukhuphuka ngo-15-20%.
Ama-algorithms okusekwe kuwo uhlelo lwe-RSM Router, lapho kubalwa i-trajectory efanelekile yokunyakaza komshini, cabanga ngezimpawu zensimu ethile nesitshalo esikhula kuwo.
Ibhulokhi ye-RSM Optimax inikezela opharetha wokuhlanganisa izilungiselelo ezizoqinisekisa ukusebenza kahle komshini ngaphansi kwezimo zamanje, isibonelo, izimo zezulu - ngamazinga athile okushisa, umswakama, njll. amafasitela kusibonisi sekhompyutha esisebhodini. Kulokhu, ukukhetha kokugcina kuhlala kumhlinzeki ophethe: kumele aqinisekise izinguquko ukuze zisebenze.
I-atopilot ye-TORUM ihlanganisa iqoqa idatha kusuka ezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zezinzwa. Isibonelo, amadivaysi enzwa afakwe kumgqomo wokusanhlamvu aqapha izinga lokugcwalisa. Uma lidlula i-25%, uhlelo lokulawula amazinga ngeke livumele ukuvala. Lokhu kuzovikela izivalo zezakhiwo ze-silo kusuka emonakalweni wezakhi.
Eminye imininingwane ecutshungulwa yi-autopilot ifaka isivuno, isilinganiso sokugcwaliswa kwe-bunker, njll. Kakhulu, i-RSM Yield Map isuselwa kwizinzwa zezivuno nezomswakama. Kukala ukuvuna kuwo wonke amaphuzu asensimini futhi kukhiqize amamephu ezithelo nomswakama. Le mininingwane idluliselwa ngesiteshi se-GSM esiqeshini sekhompyutha se-Agrotronic, esizibona ngesimo samamephu. Zingabukwa nganoma yisiphi isikhathi noma zilandwe ukuze zihlaziywe. Ithuluzi elisebenzayo lokulawulwa kokufaka umanyolo neminye imisebenzi. Isibonelo, lapho isivuno sishintsha, i-autopilot ngokuzenzakalelayo ibala kabusha isikhathi nendawo yokulayisha okusanhlamvu, ngemuva kwalokho ithumela lolu lwazi kubashayeli bamaloli abathutha isitshalo besiya ensimini. AbakwaRoseselmash babika ukuthi lesi sixazululo siqeda isikhathi samaloli ensimini futhi sisebenza kahle ngama-25%
Uhlelo lokuqondisa lwe-RSM AutoDriver lusiza ekuqhubeni ukuhlanganisa ngokuqinile okufana nokudlula kwalo kwangaphambilini. Uhlelo luthola umsebenzi ngepulatifomu ye-Agrotronic, okubandakanya insizakalo yokulungiswa okuhlukile kwesihloko semoto. Ivumela ukubeka ovunayo noma kuphi emhlabeni ngokunemba kuka-2,5 cm.
Ngokuya ngomthwalo osemotweni, endlini eyondlayo, esibuyeni, e-rotor nenani lokulahleka, i-RSM AutoCrop ilungisa ngokuzenzakalelayo ijubane lokuvuna. Inhloso yawo ukuhlinzeka ngokugeleza okuqinile emnyango wento yokubhula nokuhlukanisa. Ngenxa yalokhu, ukubhula nokuhlanza kwenziwa ngokulahleka okuncane.
Umvuni we-TORUM ongakahlelelwanga ukhulisa ukusebenza kahle kokubhula, wehlise umthwalo kubasebenzi bemishini yezolimo futhi uthatha ukuphepha kwezitshalo ezingeni elisha.
Umbukiso we-AGROSALON uzobanjwa ngo-Okthoba 6 kuya ku-9, 2020 eMoscow, esikhungweni semibukiso seCrocus Expo International.
I-AGROSALON igcwala ngokusemthethweni phakathi kokuchazwa kwemishini yezolimo enkulu kunazo zonke futhi kuwukuphela kombukiso eRussia owethula imikhiqizo yabakhiqizi abahamba phambili bemishini yezolimo endaweni eyodwa.
Tags: I-Agrosalon 2020Россельмаш
Amapulazi amazambane wesifunda saseNizhny Novgorod